Moto Unopisa Unopisa Zvichiri Kusadzora muTurkey, Greece, Italy neSpain
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwekuchengetedza & Dambudziko » Moto Unopisa Unopisa Zvichiri Kusadzora muTurkey, Greece, Italy neSpain
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Greece Kupwanya Nhau • Hospitality Industry • Italy Kuputsa Nhau • nhau • chengetedzo • Spain Kuputsa Nhau • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now • Turkey Kuputsa Nhau
Ndokumbirawo unamatire Girisi yaive meseji yakagamuchirwa. Nzvimbo dzezororo pazvitsuwa zveKos, Rhodes kuGreece, Sicily, uye Maodzanyemba eSpain vari kurwira kuchengetedza izvo zvinogona kuponeswa nemoto unopisa unowedzera ku COVID-19 kupararira uye kudengenyeka kwenyika mune mamwe matunhu. Shanduko yemamiriro ekunze ndeyechokwadi, izvi zvave pachena kubva kuAntalya kuenda kuSpain.
COVID nekudengenyeka kwenyika kuri kuwedzera kuchimbichimbi chemoto
Recently eTurboNews yakashuma nezve wmoto unopisa mudunhu reAntalya muTurkey.
Kwemazuva mashoma apfuura, moto waipisa kwete chete muTurkey, asi zvakare kuGreek, Italy, neSpain. Izvi zviri kuwedzera kune kudengenyeka kwenyika muTurkey neGirisi uye kuwedzera kwehutachiona hwe COVID-19.
Kwete maKurds, sekufungidzirwa nevamwe vatungamiriri muTurkey, asi shanduko yemamiriro ekunze ine mhosva. Iyi yambiro yakakomba inokonzereswa nehunhu hwakashungurudzwa.
Mazana akabviswa kubva kumahombekombe emahombekombe uye mudzimba kumatunhu zvakare kuyedza kudzosa ushanyi.
Iri ndiro zuva rechitanhatu nemazana evanhu vakatamiswa kuGreece, Italy, neSpain nemazana akaburitswa munzvimbo dzekugara dzemahombekombe nedzimba.
Huwandu hwevanhu vakafa kubva kumoto weTurkey wakakwira kusvika pamasere mushure mekunge vamwe vanhu vaviri vafa neSvondo muManavgat. Moto mudhorobha yakanga yatotora hupenyu hwevanhu vashanu uye munhu mumwe muhotera yeMarmaris.
Turkey iri kutambura moto wayo wakaipisisa mukati memakore gumi, iine angangoita 95,000 mahekita apiswa kusvika pari zvino semvura inopisa inofukidza iyo Mediterranean.
Dzakawanda dzemoto 112 kana dzakaputika muTurkey chete mumazuva mashanu apfuura dzavepo, nevadzimi vemoto vachitarisa zvavanoita muManavgat, Marmaris, neMilas.
Vakuru veTurkey vanoongorora chinokonzeresa moto unonzi varwi vechiKurd kana kupisa nevana, asi sezvo moto zvino usiri kungopararira muTurkey asi nyika zhinji dzekumaodzanyemba kweEurope, nyaya iyi ingangoenderana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
MuPascara, Italy, vanhu mazana masere vakabviswa mudzimba uye nzvimbo dzekudyira dzemahombekombe mushure mekunge moto wabura munzvimbo inochengeterwa zvisikwa makumi mashanu nemashanu. Sangano renyika rekudzima moto rinoti rakadaidzirwa kunopfuura mazana masere ekukurumidzira. 800 moto wekukurumidzira akaverengerwa mu53, 800 muPuglia neCalabria, 250 muLazip, uye makumi manomwe muCampania.
MuSicily, vanhu mazana maviri vakabviswa kubva kuguta rechiteshi cheCatania.
MuGreek, moto wakaputika mukupera kwesvondo muPatras, pamhenderekedzo yekumadokero. Misha mishanu yakabviswa uye vanhu vasere vakaiswa muchipatara nekuda kwematambudziko ekufema uye nekupiswa.
Vadzimi vemoto vakarwa nehusiku kuti vabate moto pachiwi cheRhodes.
Rhodes, chikuru pane zvitsuwa zveGreek zveDodecanese, inozivikanwa nenzvimbo dzayo dzemahombekombe emahombekombe, matongo ekare, uye zvisaririra zvebasa rayo nemaKnights eSt.John panguva yehondo dzehondo. Guta reRhodes rine Guta Rekare rine Mugwagwa wekare weMa Knights uye nhare-yakafanana neImba yeGreat Masters. Akatorwa nemaOttoman ndokuzobatwa nemaItari, imba yamambo yava nhoroondo yemuseum.
Ndege nemaherikoputa zvakadonhedza mvura pamusoro pemoto muMaritsa nePsinthos kumatunhu ekuchamhembe apo kusimbiswa kwakatumirwa neMuvhuro mangwanani.
Mumwe mushanyi akatumira tweet kuti: "Ndege dzakamira maawa matatu apfuura kudhonza mvura kubva mugungwa. Saka ndinofungidzira kuti moto waenda. Nhasi vabhururuka maminetsi masere pamusoro pehotera yedu. Kutenda kune vese vanodzima moto nevabatsiri. ”
Ese 5-10 min vanoisa mvura pamberi peIhotera yedu. #rhodes #rhodos #moto #greecefire pic.twitter.com/TyhuaIE2jW
"Tiri kugara mugehena," akadaro Meya weBodrum: "Hazvigoneke kudzima moto pasi, uye kunonoka kushandisa ndege dzevanodzima moto kana maherikoputa. Tiri kuedza kuchengetedza nzvimbo dzekugara. Asi isu hapana chatingaite kununura miti.
Inopisa Moto muEurope neTurkey
@selingirit uye @timursoykan tweeted kasingaperi) Hapana mubvunzo kuti kukanganisa kwacho kuchadzorerwa! ”
Munzvimbo dzekugara kunze kweAtene, dzimba dziri kutsva, mamiriro ezvinhu pachitsuwa cheGreek chezororo cheKos & Rhodes apererwa; imwe tweeter yakati ndokuwedzera: "..se ini ndiri pakati pemhepo inopisa ye45 centigrade, covid, uye kudengenyeka kwenyika."
Kubva kuGreece, chinyorwa chinoti: "Girisi yose iri kutsva .. kuchamhembe kweAthens, Rhodes, moto hauchadzoreki. Ndapota namatira Girisi. ”
Mumwe muverengi muAthens akawedzera kuti: “Muchikamu chekuchamhembe kweAthens, moto uri kukonzerwa nekuputika kwetambo dzakasimba. Kune zvakare moto muzasi kwePeloponnesus, muRhodes, muKos, uye mune mamwe matunhu eGirisi nekuda kwekupisa kwakanyanya. Zvinhu zviri kufamba sei kuSpain? ”
Moto wemoto muSpain wakapisa mahekita makumi emakumi masere nemasere nemakumi mapfumbamwe nemana muna81,194. Zviremera zvemuno zvakashuma moto unokwana zviuru gumi nemazana manomwe nemakumi manomwe nenomwe, ayo 2019 10,717 aive akakura kupfuura hectare imwe. Izvi zvinosanganisira mwoto mikuru gumi nemana yakakanganisa mahekita anopfuura mazana mashanu imwe neimwe.